Haddii Aad Sidan Ku Wado Ganacsigu Wuu Burburayaa!
Markii uu wiilkiisa C/raxman ka soo qalin jebiyay Kulliyada ganacsiga ee Jaamacadda markiiba wuxu shaqadii la bilaabay Aabihii oo Huteel cuntada lagu iibiyo lahaa. Aabihii wuxu ahaa mid aad u anxariis badan oo raashinka aad u siiya qof kasta oo baahan.
Laakiin wiilka ayaa aabihii ku yidhi “Aabo anigu sidan kuma shaqayn karo, waxaan soo baratay cilmiga ganacsiga , iyo in waxa ku soo gala iyo kharashka is dheelitirto, macamiilkaagana raali geliso, laakiin sidan ma wanaagsan.
Aabaha oo waayo arag aha ayaa ugu jawaabay in neefka adhiga ahi uu dhalo hal neef keliya , haddana uu ka badan yahay Eyga oo markiiba dhala 3- 6 , , adigu taasi ma fahmaysaa ayuu ku yidhi wiilkiisa? Aabah ayaa intii aanu ajwaabin ku yidhi waa barkada, 20 sano ayaan huteelkan hasytau oo aan idinku koriyay, waxna isma dhimin. Sadaqaduna waxab ma yeesho, ee Aabo sheqee halkan ayaan anigu aqoon u leeyahay oo ma burburaysee.
Waayo aragnimadu waa arin muhiim u ah shaqada waxaana ay keenta inuu qofku ku dhiirado shaqada. Cilmi kastana waxa loo baahan yahay in lagu ladho waayo aragnimo.